दिनहुँ साबुनले नुहाउँदा हुन्छ यस्ताे बेफाइदा, कसरी नुहाउने ?
एजेन्सी । हरेक दिन नुहाउने धेरैको बानी हुन्छ । दिनहुँ नुहाउँदा शारिरीक स्फुर्ति बढ्ने बताइन्छ ।
तर, दिनहुँ साबुन प्रयोग गरेर नुहाउँदा भने छालामा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी चर्मरोग विशेषज्ञले दिएका छन् । तर, नुहाउनु अघि र पछि सजगता अपनाउन सक्ने हो भने यस्ता असरबाट जोगिन सक्ने तर्क पनि विेशषज्ञले छ । अमेरिकास्थित युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया सान डिएगो स्कुल अफ मेडिसिनकी चर्मरोग विशेषज्ञ डा. क्यासे कार्लोसले दिनहुँ साबुनले नुहाउँदाका बेफाइदा बताएकी छिन् ।
दिनहँु साबुन प्रयोग गरेर नुहाउँदा छालामा हुने एक विशेष प्रकारको तैलीय पदार्थलाई नोक्सान गर्छ । हाम्रो शरिरलाई आवश्यक तैलीय पदार्थ कम भएपछि सुख्खा हुने र छालामा विभिन्न समस्या निम्तिने हुनसक्छ । काखी,जाँघ, पैताला लगायतका स्थानमा दिनुहँ साबुन प्रयोग गर्नु अझ घातक हुनसक्छ ।
दिनहुँ नुहाउने व्यक्तिले साबुनको प्रयोग गर्नुपर्छ नै भन्ने छैन । चिसो पानीले हल्का शरीर पखाल्दा पनि स्फुर्ति प्राप्त हुन्छ । साबुनको प्रयोग नै गर्ने हो भने नुहाउनु अघि र पछि केही सजगता अपनाउनुहोस् । नुहाउनुअघि र पछि शरीरमा तेल र क्रिम लगाउने हो भने छालामा विशेष तैलिय पदार्थ नष्ट हुनबाट जोगिन्छ ।a